Ọrụ nke onye were gị n'ọrụ na onye were ya n'ọrụ dịka Iwu Ọnọdụ Ọrụ | Law & More BV
blog » Ọrụ nke onye were gị n'ọrụ na onye ọrụ dịka Iwu Ọnọdụ Ọrụ
Ọrụ nke onye were gị n'ọrụ na onye ọrụ dịka Iwu Ọnọdụ Ọrụ
Ọrụ ọ bụla ị na-arụ, ụkpụrụ bụ isi na Netherlands bụ na onye ọ bụla ga-enwe ike ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu na ahụike. Ọhụụ dị n'okwu a bụ na ọrụ ahụ agaghị eduga n'ọrịa anụ ahụ ma ọ bụ nke ọgụgụ isi ma ọ bụghị ịnwụ n'ihi ya. Bykpụrụ a na-ekwe nkwa na omume site na Ọnọdụ Ọnọdụ Ọrụ. Ihe omume a bụ iji kwalite ọnọdụ ọrụ dị mma yana igbochi ọrịa na enweghị ike maka ọrụ nke ndị ọrụ. You bụ onye were gị n'ọrụ? N'okwu ahụ, nlekọta maka gburugburu ọrụ ọrụ ahụike na nchekwa dị n'usoro iwu Ọnọdụ Ọrụ yana gị na gị. N'ime ụlọ ọrụ gị, ọ bụghị naanị na ị ga-enwerịrị ihe ọmụma zuru oke nke ịrụ ọrụ ahụike na nchekwa, mana a ga-agbaso ụkpụrụ nduzi nke Ọnọdụ Ọnọdụ preventrụ Ọrụ iji gbochie ihe egwu na-enweghị isi nye ndị ọrụ. You bụ onye ọrụ? N'okwu ahụ, a na-atụkwa anya ihe ole na ole n'aka gị gbasara gburugburu ọrụ ọrụ ahụike na nchekwa.
Ọrụ nke onye ọrụ
Dabere na Ọnọdụ Ọnọdụ Ọrụ, onye were gị n'ọrụ bụ isi na-akpata ọnọdụ ọrụ yana onye ọrụ ya. Dịka onye ọrụ, ị gha itinye aka na okike nke ebe ọrụ ahụike na nchekwa. Karịsịa, dịka onye ọrụ, n'ihi Iwu Ọnọdụ Ọrụ, iwu ji gị:
iji akụrụngwa ọrụ na ihe egwu dị egwu;
ịghara ịgbanwe na / ma ọ bụ wepu nchebe na ngwa ọrụ;
iji akụrụngwa nchedo onwe onye / ihe enyemaka nke onye were gị n'ọrụ wepụtara n'ụzọ ziri ezi ma debe ha n'ọnọdụ kwesịrị;
na-arụkọ ọrụ na ozi na ntuziaka a haziri ahazi;
iji gwa onye were gị n'ọrụ banyere ihe egwu dị na ahụike yana nchekwa na ụlọ ọrụ;
iji nyere onye were gị n'ọrụ na ndị ọkachamara ndị ọzọ aka (dị ka onye na-ahụ maka mgbochi), ọ bụrụ na ọ dị mkpa, n'ịrụ ọrụ ha.
Na nkenke, ị ghaghị ịkpa àgwà dị ka onye ọrụ. Na-eme nke a site na iji ọnọdụ ọrụ na nchekwa ma site n'ịrụ ọrụ gị n'ụzọ dị mma ka ị ghara itinye onwe gị na ndị ọzọ n'ihe egwu.
Ọrụ nke onye were gị n'ọrụ
Iji nwee ike inye ezigbo arụ ọrụ na nchekwa, gị onye were gị n'ọrụ ga-agbaso amụma agbadoro ọnọdụ kachasị mma. Iwu Ọnọdụ Ọrụ na-enye ntụzịaka maka iwu a yana ọnọdụ ọrụ ndị kwekọrọ na ya. Iji maa atụ, amụma ọnọdụ ọrụ ga-etinyere n'ọnọdụ ọ bụla ihe egwu na nyocha (RI&E). Dịka onye were gị n'ọrụ, ị ga-ederịrị ihe edere na ihe ọrụ dịịrị ndị ọrụ gị, otu esi edozi nsogbu ndị a maka ahụike na nchekwa n'ime ụlọ ọrụ gị yana ihe egwu dị n'ụdị ihe ọghọm ọrụ emeelarị. A onye uwe ojii mgbochi enyere gị aka ịdepụta ngwa ahịa na nyocha dị egwu ma na-enye ndụmọdụ maka amụma gbasara ahụike na nchekwa. Companylọ ọrụ ọ bụla aghaghị ịhọpụta ma ọ dịkarịa ala otu onye ọrụ mgbochi dị otú ahụ. Nke a agaghị abụ onye si n'èzí ụlọ ọrụ. You na-ewe ndị ọrụ iri abụọ na ise ma ọ bụ pee mpe? Mgbe ahụ inwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye ọrụ mgbochi n'onwe gị.
Otu ihe ọghọm nke ụlọ ọrụ ọ bụla were ndị ọrụ n'ọrụ nwere ike ihu bụ enweghị ọrụ. Dabere na Ọnọdụ Ọnọdụ Ọrụ, gị dịka onye were gị n'ọrụ ga-enwerịrị a amụma enweghị ọrịa. Kedụ ka ị were dị ka onye were gị n'ọrụ gbasara ịla azụ mgbe ọ na-apụta n'etiti ụlọ ọrụ gị? I kwesiri idekọ azịza nke ajụjụ a n'ụzọ doro anya, n'ụzọ zuru oke. Agbanyeghị, iji belata ohere nke ihe egwu dị otu ahụ, ọ dị mma ịnweta nyocha ahụike oge oge (PAGO) rụrụ n'ime gị ụlọ ọrụ. N'oge nyocha dị otú ahụ, dọkịta ụlọ ọrụ na-achọpụta ma ị nwere nsogbu ahụike n'ihi ọrụ. Itinye aka na nyocha dị otú ahụ abụghị iwu maka onye ọrụ gị, mana ọ nwere ike ịba uru dị ukwuu ma nye aka na gburugburu nke ndị ọrụ dị mma ma dị mkpa.
Na mgbakwunye, iji gbochie ihe egwu ndị ọzọ na-atụghị anya ya, ị ga-ahọpụta otu n'ime ulo nzaghachi mberede (BHV). A zụrụ onye ọrụ na-ahụ maka nsogbu mberede nke ụlọ ọrụ iji kpọta ndị ọrụ na ndị ahịa na nchekwa na mberede ma yabụ ga-enye aka na nchekwa nke ụlọ ọrụ gị. You nwere ike ikpebi n’onwe gị onye na ole ka ị họpụtara dịka onye ọrụ mmezi ihe mberede. Nke a metụtakwara ụzọ ụlọ ọrụ ga-esi meghachi omume ngwa ngwa. Agbanyeghị, ị ga-elebara ụlọ ọrụ gị anya.
Nlekota na nnabata
N'agbanyeghị iwu na ụkpụrụ ndị dị adị, ihe mberede ọrụ na-eme kwa afọ na Netherlands nke ndị were ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ were gbochie ya. Ọnụnọ nke Ọnọdụ Ọnọdụ Ọrụ anaghị apụta na ọ zuru oke oge niile iji kwado ụkpụrụ nke onye ọ bụla ga-enwe ike ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu na ahụike. Ọ bụ ya mere ndị Inspectorate SZW ji enyocha ma ndị were gị n'ọrụ, mana ma ndị ọrụ ha na-agbaso iwu maka ọrụ ahụike, nchekwa na ọrụ ziri ezi. Dịka Iwu Ọnọdụ Na-arụ Ọrụ, Inspectorate nwere ike ịmalite nyocha mgbe ihe ọghọm mere ma ọ bụ mgbe otu ndị ọrụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ ndị otu azụmahịa na-arịọ ya. Na mgbakwunye, nyocha ahụ nwere ikike na-aga n'ihu ma na-emekọ ihe ọnụ na nyocha a bụ iwu. Ọ bụrụ na ndị nyocha ahụ hụrụ mmebi nke Iwu Ọnọdụ Ọrụ, ịkwụsị ọrụ ahụ nwere ike ibute nnukwu mma ma ọ bụ mpụ / mmebi iwu akụ na ụba. Iji gbochie ụdị ọrụ dị otú ahụ, ọ ga-adị mma maka gị dịka onye were gị n'ọrụ, yana kwa onye ọrụ, irubere ọrụ niile nke Iwu Ọnọdụ Ọrụ.
You nwere ajụjụ ọ bụla gbasara blog a? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ndị ọkachamara n'ihe gbasara iwu ọrụ ma nwee obi ụtọ inye gị ndụmọdụ.
Previous Post Iwu mmanye: Ikwenye ka o gaghi ekwe?
Next Post Ịgbahapụ